फोनमा र पीसी on Emulator.online ▷ by द्वारा फोटोमा वाटरमार्क कसरी राख्ने
फोटोमा वाटरमार्क राख्नु भनेको तपाईंको नाम वा व्यवसायलाई छविमा लिंक गर्न एक तरिका हो। हाल, त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू र अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको लोगो राख्नका लागि अनुमति दिन्छ, या त तपाईंको फोनमा वा तपाईंको पीसीमा, केहि चरणहरूमा। यो कति सरल छ हेर्नुहोस्।
तपाईंको फोनमा फोटोमा वाटरमार्क घुसाउन, PicsArt अनुप्रयोग प्रयोग गरौं। स्वतन्त्र हुनुको साथै, यसले तपाईलाई छवि र पाठ दुबै प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, व्यक्तिगत तरीकाले। त्यसकारण, चरण-देखि-चरण अनुसरण गर्नु अघि, यो तपाईंको Android वा आईफोन उपकरणमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न आवश्यक छ।
1. PicsArt खोल्नुहोस् र एउटा खाता सिर्जना गर्नुहोस् वा तपाईंको जीमेल वा फेसबुक प्रयोगकर्ता डाटा मार्फत लग इन गर्नुहोस्;
यदि तपाई अनुप्रयोगमा सदस्यता लिन सल्लाह पाउनुहुन्छ भने ट्याप गर्नुहोस् X, प्राय: विज्ञापन बन्द गर्नको लागि स्क्रीनको शीर्षमा अवस्थित हुन्छ। वाटरमार्क सम्मिलित गर्न विकल्प सेवाको नि: शुल्क संसाधनहरूको बीचमा उपलब्ध छ।
2. गृह स्क्रिनमा, छुनुहोस् + सुरु गर्न;
3. फोटो छान्नुहोस् जहाँ तपाईं यो चयन गर्न वाटरमार्क सम्मिलित गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंले यसलाई देखिरहनु भएको छैन भने, जानुहोस् सबै फोटोहरू तपाईंको उपकरणमा उपलब्ध सबै फोटोहरू अवलोकन गर्न;
4. सबै प्रकार्यहरू हेर्न छविको तलको उपकरणपट्टीमा तान्नुहोस्। मैले छोए पाठ;
5. त्यसोभए तपाईंको नाम वा तपाईंको कम्पनीको लेख्नुहोस्। चेक आइकन (✔) ट्याप गर्नुहोस् जब सकियो;
6. तपाईंले सम्पादन सुरू गर्नु अघि, पाठलाई इच्छित स्थानमा राख्नुहोस्। यो गर्न, छुनुहोस् र पाठ बाकस तान्नुहोस्।
पाठ बक्सलाई बढाउन वा घटाउन पनि सम्भव छ र फलस्वरूप, पत्र यसको टुप्पोमा देखा पर्ने सर्कलहरूमा छोएर ड्र्याग गरेर;
7. अब, तपाइँ वाटरमार्क छोडन को लागी टेक्स्ट एडिटिंग उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ तपाईले चाहानुहुन्छ। निम्न स्रोतहरू उपलब्ध छन्:
स्रोत: पत्रहरूको बिभिन्न शैलीहरू प्रदान गर्दछ। जब तपाईं कुनै पनि छुनुहुन्छ, यो फोटोमा सम्मिलित गरिएको पाठमा लागू हुन्छ;
रंग: नामले सlies्केत गरे जस्तै, यसले तपाईंलाई पत्रको रंग परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। चाँडै नै जाँच गर्नुहोस्, ढाँचा र बनावट समावेश गर्न अझै विकल्पहरू छन्;
धार: तपाइँले अक्षरमा बोर्डर घुसाउन र यसको मोटाई छनौट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ (पट्टीमा राशि);
अस्पष्टता: पाठको पारदर्शिता बदल्नुहोस्। यो एक महत्त्वपूर्ण सुविधा हो त्यसैले वाटरमार्क एक सूक्ष्म तरिकामा सम्मिलित गरियो, फोटोको दृश्यलाई अवरोध नगरी;
छाया: पत्र शेडिंग सम्मिलित गर्न प्रकार्य। यो छायांकन को लागी एक र choose छनोट गर्न को लागी, साथै यसको तीव्रता र स्थिति समायोजित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ;
Bueno: पट्टीमा परिभाषित कोणको आधारमा शब्द वा वाक्यांशमा घुमाव घुसाउँदछ फोल्ड गर्न। तपाईको ब्यापारको प्रकारमा निर्भर हुन्छ, तपाई आफ्नो ब्रान्डलाई रमाईलो स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ।
8. सम्पादन गरेपछि, स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने कुनामा अवस्थित चेक आइकन (✔) मा जानुहोस्;
9. परिणाम सुरक्षित गर्न माथिको दायाँ कुनामा एरो आइकन ट्याप गर्नुहोस्;
10। अर्को स्क्रिनमा, जानुहोस् बचत गर्नुहोस् र त्यसपछि भित्र तपाईंको उपकरणमा बचत गर्नुहोस्। छवि तपाईंको स्मार्टफोनको ग्यालरी वा पुस्तकालयमा बचत हुनेछ।
वाटरमार्कको रूपमा छवि घुसाउनुहोस्
PicsArt ले तपाईंलाई तपाईंको कम्पनी आइकन घुसाउनको लागि अनुमति दिन्छ तपाईंको ब्रान्ड नाम मात्र टाइप गर्नुको सट्टा। यो गर्नका लागि तपाईसँग पहिले JPG मा तपाईंको लोगो छवि हुनु पर्छ ग्यालरी o Biblioteca मोबाइल फोन।
त्यसैले बस अनुसरण गर्नुहोस् चरण १ देखि।माथि उल्लेखित। त्यसोभए, उपकरण ट्रेमा ट्याप गर्नुहोस् ए फोटो। वांछित फाइल छान्नुहोस् र यकिन गर्नुहोस् थप्नुहोस्.
पाठको रूपमा, तपाईले छुनु र तानेर सम्मिलित छविको स्थिति र आयामहरू समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। अनुपातलाई कायम राख्दै पुनःआकार गर्न हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईले डबल-हेडिंग एरो आइकन छनौट गर्नुहोस्।
लोगो राखियो, विकल्पमा जानुहोस् अस्पष्टता, पर्दाको तल उपलब्ध। यसलाई पारदर्शी हुन कम गर्नुहोस् ताकि यसले मुख्य छविलाई गडबड गर्दैन, तर अझै देखिने छ। दायाँको स्क्रीनको शीर्षमा प्रमाणिकरण आइकन (✔) को साथ प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्।
नतीजा बचत गर्न, माथि दायाँ कुनामा एरो आइकन ट्याप गर्नुहोस् र अर्को स्क्रिनमा जानुहोस् बचत गर्नुहोस्। भित्र निर्णय निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको उपकरणमा बचत गर्नुहोस्.
अर्को ट्यूटोरियलमा, हामी iLoveIMG वेबसाइट प्रयोग गर्नेछौं। सेवाले आकार र अस्पष्टतालाई अनुकूलन गर्नका साथै दुबै छवि र पाठमा वाटरमार्क घुसाउन अनुमति दिन्छ। प्रयोगकर्ताले सजिलैसँग एकै समयमा धेरै फोटोहरू ब्रान्ड गर्न सक्दछ।
1. तपाईंको छनौटको ब्राउजर खोल्नुहोस् र iLoveIMG वाटरमार्क उपकरण पहुँच गर्नुहोस्;
2. बटनमा क्लिक गर्नुहोस् छविहरू चयन गर्नुहोस् र छवि छनौट गर्नुहोस् जुनमा तपाईं आफ्नो कम्प्यूटरमा वाटरमार्क घुसाउन चाहनुहुन्छ;
3. छवि र पाठमा वाटरमार्क सम्मिलित गर्न प्रक्रिया समान छ:
A) चित्रमा: यदि तपाइँ तपाइँको कम्पनी लोगो जस्तो छवि सम्मिलित गर्न चाहानुहुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस् छवि थप्नुहोस्। त्यसपछि तपाईंको पीसीमा छवि छनौट गर्नुहोस्।
दोस्रो) पाठमा: थिच्नुस पाठ थप गर्नुहोस्। इच्छित पाठ लेख्नुहोस्, जस्तै तपाईंको नाम वा तपाईंको ब्रान्ड। तपाईं गीतको निम्न पक्षहरूलाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ:
स्रोत- एरियल क्लिक गर्दा अन्य विकल्पहरू प्रदर्शन गर्दछ;
Talla: दुई अक्षर टी समावेश आइकनमा उपलब्ध T (Tt);
शैली: बोल्ड फन्ट (दोस्रो), ईटालिक (yo) र रेखांकन (U);
पृष्ठभूमि रंग: पेन्ट बकेट आइकनमा क्लिक गर्दै;
पत्र र color्ग र शेष: अक्षर आइकन क्लिक गरेर उपलब्ध UN
फर्म्याट गर्दै: तीन लाइन द्वारा बनेको आइकनमा, पाठलाई केन्द्रबिन्दु गर्न वा धर्मीकरण गर्न सम्भव छ।
4. त्यसपछि छवि वा पाठ बक्सलाई इच्छित स्थानमा क्लिक गरेर र तानेर राख्नुहोस्। पुनःआकार गर्न, केवल किनारमा सर्कलहरू क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस्;
5. अस्पष्टता समायोजित गर्न, भित्र वर्गहरू सहित वर्ग प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्। एक बार देखा पर्नेछ जहाँ तपाईं पारदर्शिताको स्तर बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ;
6. यदि तपाईं समान छविहरू अन्य छविहरूमा घुसाउन चाहनुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् +, फोटोको दायाँ तिर। त्यसपछि तपाईंको पीसीमा अन्य छविहरू चयन गर्नुहोस्;
तपाईं प्रत्येकमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ कि अनुप्रयोग कसरी देखिन्छ र व्यक्तिगत रूपमा समायोजन हुने गर्दछ, आवश्यक छ भने।
7. बटनमा क्लिक गर्नुहोस् वाटरमार्क छविहरू;
8. मा फाईल डाउनलोड गर्नुहोस् वाटरमार्क गरिएका छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईं एकै साथ धेरै छविहरूमा वाटरमार्क घुसाउनुभएको छ भने, ती .zip ढाँचामा फाइलमा डाउनलोड गरिनेछ।
यदि तपाईं अफलाईनमा काम गर्न चाहानुहुन्छ र सम्पादन अनुप्रयोगका लागि भुक्तान गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भने, तपाईं पेन्ट थ्रीडी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोग्राम विन्डोज १० मा नेटिभ छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको कम्प्युटरमा प्रणालीको यो संस्करण स्थापित छ भने, तपाइँसँग सफ्टवेयर पनि छ।
अघिल्लो विकल्पहरूको विपरीत, अस्पष्टता परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। त्यसोभए यदि तपाइँ अधिक सूक्ष्म परिणाम चाहनुहुन्छ भने, माथि दर्साईएको केहि समाधानहरू प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ।
1. पेन्ट थ्रीडी खोल्नुहोस्;
2. थिच्नुस मेनू;
3. त्यसपछि जानुहोस् सम्मिलित गर्नुहोस् र फोटोमा चयन गर्नुहोस् जसमा तपाईं वाटरमार्क राख्न चाहनुहुन्छ;
4. प्रोग्राममा खुला फोटोको साथ, क्लिक गर्नुहोस् पाठ;
5. फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र वाटरमार्क पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्। स्क्रिनको दायाँ कुनामा, तपाईं पाठ प्रकार्यका लागि उपलब्ध विकल्पहरू देख्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई लागू गर्न, पहिले माउसको साथ पाठ चयन गर्नुहोस्।
थ्रीडी वा २ डी पाठ- यो मात्र फरक पार्छ यदि तपाईं थ्रीडी व्यू वा मिक्सड रियलिटी प्रकार्य प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने;
फन्ट प्रकार, आकार र रंग;
पाठ शैली: बोल्ड (N), ईटालिक (yo) र रेखांकन (S)
पृष्ठभूमि भर्न- यदि तपाईं पाठलाई रंगीन पृष्ठभूमि बनाउन चाहनुहुन्छ भने। यस अवस्थामा, तपाईसँगै बक्समा चाहिएको छायाँ पनी छान्नु पर्छ।
6. तपाइँले चाहानु भएको पाठ राख्न, बाकस क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस्। पाठ बाकस पुनःआकार गर्न सीमामा अवस्थित वर्गहरू क्लिक गरी तान्नुहोस्;
7. जब तपाइँ पाठ बाकसको बाहिर क्लिक गर्नुहुन्छ वा इन्टर कुञ्जी थिच्नुहुन्छ, पाठ स्थिर भयो जहाँ यो राखिएको थियो र अब सम्पादन गर्न सकिदैन;
8. समापन गर्न, मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्: मेनू As छवि को रूपमा बचत गर्नुहोस्। ढाँचा छनौट गर्नुहोस् जुनमा तपाईं बचत गर्न चाहनुहुन्छ र अन्तमा बचत गर्नुहोस्.
यदि तपाईं आफ्नो कम्पनी लोगो प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, मात्र गर्नुहोस् चरण १, २ र र तिनीहरूलाई पुन: दोहोर्याउनुहोस्, तर यस पटक, लोगो छवि खोल्दै। त्यसो भएमा केवल संकेतमा समायोजन गर्नुहोस्6चरण र बचत गर्नुहोस्, जसरी सूचित गरिएको छ 8 चरण.
कसरी वर्डमा लेटरहेडहरू बनाउने
मोबाइल उपकरणहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क भिडियो सम्पादकहरू
'फोटोशप' अनलाइन: सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क फोटो सम्पादक विकल्प